ပြည်(အင်းမ) ထမင်းသုပ် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ငံပြာရည် ၊ အရသာမှုန်.
ထမင်းထဲကို ငံပြာရည် ၊ အရသာမှုန်. ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် ၊ မန်ကျည်းမှည့်
သင်္ဘောသီးခြစ် ၊ မုန်.ဖတ် ၊ တိုဟူး၊ ရှောက်ရွက်တို.ထည့်ပြီးသမအောင်ခပ်ဖွ